N सल्लाहहरू तपाईको नAILSहरू कडा बनाउनको लागि - PAMPEREDPEOPLENY.COM - सुन्दरता
तपाईंको न Nहरू कडा बनाउनको लागि T सल्लाहहरू
घर सुन्दरता शरीर हेरचाह शारीरिक देखभाल ओआई-मोनिका खजुरिया द्वारा मोनिका खजुरिया मे 8, २०२०
कडा र सुन्दर नाखून निश्चित हामीलाई अधिक आकर्षक देखाउन बनाउँछ। तिनीहरू पनि राम्रो स्वास्थ्य को सूचक हो। तर कहिलेकाँहि हाम्रो नाखाहरू कमजोर र भंगुर हुन्छन्। कमजोर न nailsहरू निराश मात्र नभई चिन्ताजनक पनि छ।
के तपाईंले आफूलाई यस्तो अवस्थामा भेट्नुभयो जहाँ तपाईंको नाखूनमा अलिकति टगले उनीहरूलाई विच्छेद गरेको छ? वा तपाइँ केवल एक निश्चित लम्बाइ भन्दा लामो आफ्नो नाखून बढ्न लाग्न सक्नुहुन्न किनकि यो सजिलै चिप्स हुन्छ? यदि हो भने, तपाईंले वास्तवमै ध्यान दिन आवश्यक छ र यस बारे केही गर्नुहोस्।
उचित हेरचाह र ध्यानको अभावले हाम्रो ना nails्गाहरूलाई कमजोर र भंगुर बनाउँछ। तपाइँका सबै न needहरू चाहिन्छ केहि माया र लाड हेरे यस लेखमा हामी तपाइँसँग केहि महत्वपूर्ण सुझावहरू साझा गर्दैछौं जुन लामो, कडा र सुन्दर न nailsहरू पाउन तपाइँले दिमागमा राख्नु पर्छ।
तपाईंको हातहरूलाई पानीमा धेरै लामो समयसम्म नराख्नुहोस्
तपाइँ कति जनालाई थाहा छ कि हाम्रा न nailsहरू भुरभुरा छन्? हो, तिनीहरू छन्। यसको मतलब हाम्रो न nailsहरूले सजिलैसँग पानी अवशोषित गर्न सक्दछ। र यदि हामीले पानीमा न nailsहरू लामो समयसम्म राख्यौं भने, पानीले अवशोषित गर्दा हाम्रो ना nails्गोहरू कमजोर हुन्छन् जसले गर्दा सजिलै चिप हुन्छ। त्यसोभए, आफ्नो न waterहरू धेरै लामो पानीमा नराख्नुहोस् र तपाईंसँग बलियो न nailsहरू हुनेछ।
केही सनस्क्रीन राख्नुहोस्
हो, सनस्क्रीन। यो केवल हाम्रो छालालाई मात्र सूर्य संरक्षण चाहिन्छ तर हाम्रो न nails पनि। सूर्यमा लामो समय सम्मको सम्पर्कले तपाईंको ना your्गाहरूलाई कमजोर र भंगुर बनाउन सक्छ। त्यो-सनस्क्रीनको लागि सजिलो उपाय छ। जब तपाईं घाममा बाहिर निस्कनुहुन्छ, आफ्ना न nailsहरूमा केही सनस्क्रीन मसाज गर्नुहोस्। यसले घामका किरणहरु को हानिकारक प्रभावहरु बाट तपाइँको नाखाहरु लाई बचाउन सक्छ।
१२-चरण गाइड घर मा एक DIY मैनीक्योर गर्न
चाँडै सुक्ने नेल पेंटहरू त्याग्नुहोस्
हामी सबै ठाउँमा सर्टकट चाहन्छौं। यति धेरै कि हामी हाम्रो पोलिश यसको आफ्नो गतिकोमा सुक्नको लागि कुर्दै सक्दैनौं। हामीमध्ये धेरैलाई द्रुत-सुक्खा नेल पॉलिशको साथ पागल भएको छ। यी चाँडै सुन्दर र सुक्खा देखिन्छन्। हामी अरू के सोध्न सक्छौं? होल्ड गर्नुहोस्। यति छिटो होईन। सर्टकटहरू सधैं उत्तम हुँदैनन्। यी द्रुत-सुक्खा नेल पेन्टहरूमा मदिरा र फार्मल्डिहाइड हुन्छ जसले तपाईंको नाखूनको ओसिलोपनालाई सुख्खा, भंगुर र कमजोर छोड्छ। तपाईका नाखाहरुका लागि सामान्य पोलिशमा स्विच गर्न उत्तम हुन्छ।
घरका कामहरू गर्ने बेलामा आफ्ना हातहरू छोप्नुहोस्
जब तपाईं घरका कामहरू जस्तै भाँडा माझ्ने वा लुगा धुने काम गर्दै हुनुहुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले पन्जाको एक जोडी लगाउनु भएको छ। यसले तपाईंलाई डबल सुरक्षा प्रदान गर्दछ। पहिलो, तपाईंको न nailsहरू निरन्तर पानीमा पर्दैन र दोस्रो, डिश साबुन र डिटर्जन्टमा रहेको रासायनिक पदार्थले तपाईंको ना nails्गहरू सुख्खा र नाजुक बनाउँछ जुन अन्ततः चिपिंगमा जान्छ।
तपाइँको कटिकल्सलाई नियमित रूपमा मालिश गर्नुहोस्
कटिकल्स भनेको पोइन्टहरू जहाँबाट तपाईंको नाखाहरू बढ्छन्। कटिकल्सलाई नियमित रूपमा मालिश गर्दा तपाईंको कटिकलमा रक्त संचार राम्रो हुन्छ र फलस्वरूप स्वास्थ्य र कडा नेलको बृद्धि हुन्छ। यो सानो कार्य हप्तामा दुई वा तीन पटक प्रदर्शन गर्नाले निम्न हप्ताहरू र महिनाहरूमा तपाईंलाई ठूलो नतिजा प्राप्त गर्दछ।
Recommeded पढ्न: DI DIY नेल सुन्दर र कडा न Nहरू पाउन
तपाईंको नाखून छोटो राख्नुहोस्
यदि विगतमा तपाईले आफ्ना लामो न nailsहरूको हल्का हल्का चालमा चिप्लिरहनु भएको छ भने, तपाईंलाई थाहा छ यो राम्रो छ कि तपाईंले आफ्नो न nails्ग छोटो राख्नुभयो। सुपर लामो न nailsहरू अतिरिक्त हेरचाह र मर्मत आवश्यक छ जुन प्राय: प्रदान गर्न असमर्थ हुन्छ। एउटा ठूलो सल्लाह भनेको तपाईको ना nails्गो छोटो राख्नु भनेको यो सुनिश्चित गर्न सबै उपायहरु लिनु कि तपाईका ना nails्गहरु कडा र स्वस्थ हुन्छन् सुनिश्चित गर्नका लागि लामो न nails संग अर्को मौका लिनु भन्दा पहिले।
पुरानो भारतीय मुद्रा नोट बेच्न चाहन्छौं
एक्रिलिक नails्ग ब्रेक दिनुहोस्
हामी एक्रिलिक नाखूनको पछाडिको तपाईंको मोहलाई बुझ्दछौं। तिनीहरू अचम्मका आकार र बान्कीमा आउँदछन् र हाम्रा न nailsहरू राम्रा बनाउने आश्चर्यजनक कार्य गर्छन्। तर, त्यहाँ अर्को पक्ष छ- अन्धकार पक्ष, यदि तपाईं सक्नुहुन्छ। एक्रिलिक न nailsहरूले हाम्रो नेलको ओछ्यानलाई धक्का दिन्छ र निचोरेर यसले हाम्रो प्राकृतिक नेललाई कमजोर र भंगुर बनाउँछ। यसको शीर्षमा, एक्रिलिक न nailsहरू हटाउने प्रक्रिया तपाइँको नाखाहरूको लागि जाँच गर्दैछ र प्राय जसो नail बिच्छेद हुन्छ। तपाईंको जेल सुकाउन प्रयोग गरिएको UV लाइट्सले तपाईंको नेलको पनि राम्रो गर्दैन।
नियमित म्यानिक्योरहरू सम्पन्न भयो
म्यान्सिचरहरू तपाईका नाखूनहरूका लागि बलको फोर्सहरू जस्ता छन्। नियमित मैनीक्योर अपोइन्टमेन्टहरू मजबूत र सुन्दर न .हरू प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण हुन्। लाडवाही गर्ने मसाज र मॉइश्चराइजेसन जुन म्यानीक्योरले प्रदान गर्दछ तपाईका नाखाहरु स्वस्थ हुनका लागि महत्वपूर्ण छन्। त्यसो भए, तपाईंको म्यान्सिकरहरूसँग नियमित हुनुहोस्। र यदि तपाईं एक मेनीक्योर पूरा गर्न बारम्बार पार्लरहरू भ्रमण गर्न रुचि राख्नुहुन्न भने, तपाईं सजिलै घरमा पोषणयुक्त मैनीक्योर गर्न सक्नुहुन्छ।
किन मान्छे लाई लामो कपाल मन पर्छ
खाली पेट बिहान केरा खाँदै
चंद्र ग्रहण जुलाई २०१ ast ज्योतिष समय
कसरी गाढा माथिल्लो ओठबाट मुक्त हुने
हिन्दुमा पहिलो भगवान को हुनुहुन्छ?
कसरी स्तनको आकार घटाउने